अत्याचारीहरु मर्दा उसको शासनको अन्त्य हुन्छ; शहीद मरेपछि उसको शासन शुरु हुन्छ ।
“The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.” – सोरेन किर्केगार्ड
आज शहीद दिवस! कसरी सम्झौ हामी नेपाल आमाका ती महान सन्तानलाई? यो प्रश्नले मलाई आज विहानैबाट विथोली रह्यो । दिउसो बाबुराम सरकारको सर्वसत्तावादको विरोध गर्दै आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा पुगें । त्यसपछि पनि खसखस लागि रह्यो । मानिसहरु कसरी शहीदलाई स्मरण गर्दा हुन्? मैले केही कोटेशन खोजें । केही स्वाद लागेकालाई जवरजस्ती नेपाली बनाए । केही चांही यत्ति कै अङ्ग्रेजीमा राखें ।
हाम्रा महान शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर मन लागेमा लौ हेनुहोस्– Read More…
झण्डै ४ वर्ष अघि उहाँ विरामी हुनुभयो । काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उहाँको पार्टी– नेकपा (एमाले)का वरिष्ट नेता कमरेड माधव नेपाल भेट्न आउनुभयो, कमरेड माधव त्यतिखेर मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । दुर्भाग्यवस म त्यो समय अस्पतालमा थिइन । केही बेरको भलाकुसारी पछि प्रमज्यूले बुबालाई कुरी रहेका मेरा भाईलाई भन्नु भएछ– ‘तपाईको बुबाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ । बिरामी भएको बेला उहाँको उपचारमा कुनै कमी नरहोस्, खर्चको अभावमा उपचार नहुने अवस्था नआओस् । म छु, हाम्रो पार्टी छ– के चाहिन्छ, विना संकोच खवर गर्नुहोला । म व्यवस्था गर्छु …।’ Read More…